katsamba kune vese vashandisi ve galaxy s8: kubhadharisa nekukurumidza kunongoshanda chete skrini payadzima
Kuru Nhau & Ongororo Tsamba kune vese vashandisi veGPS S8: kubhadharisa nekukurumidza kunongoshanda chete iyo skrini iri kudzima
Mazuva ano, smartphone ine imwe mhando yekukurumidza kuchaja mhinduro yave tsika, kwete iyo yekusara, saka vanhu vazhinji vanogona kuregererwa nekuda kwekukanganwa nezve chimiro. Saka ichi chiyeuchidzo chehushamwari kuti iyo S8 inoratidzira iyo chaiyo tekinoroji seyakatangira iyo, iyo S6 uye S7, yakaita pamberi payo. Samsung Adaptive Fast Charge, iri rinongova rimwe zita reQualcomm & apos; s Quick Charge 2.0, ichiri kuita basa rayo pamwe chete nezvayakaita makore mashoma apfuura, chokwadika, asi zvinoita saizvozvo nediki diki: unogona & apos; t ishandise iyo yako kifaa & apos; s skrini iripo.
Ridaidze dambudziko repasirese repasi kana uchida, asi richiri rudzi rwevashandisi bummer veSamsung & apos; s dzinodhura kwazvo mureza wakambomira uchishandisa kukanganisa, hunyanzvi-makore tekinoroji paine dzimwe nzira dziri nani. Muchokwadi, Qualcomm & apos; s Yekukurumidza Charge 4.0 inokanda iyi muganho ichipawo inokurumidza kumhanya futi. Uye iyo Snapdragon 835, iyo inopa simba iyo vhezheni yeUS yechishandiso, inotsigira 4.0 zvakangonaka, asi sezvo iyo yepasi rose vhezheni ine yayo-yakura imba Exynos 8895 chipset haina & apos; t, Samsung inoita kunge yakasarudza kusaenderera mberi nekuparadzanisa kwayo mushandisi base.
Chii chakanyanya kusuwa pano, zvisinei, ndechekuti kambani inoita kunge yakanganwa nezve iyi ganhuriro yeAdaptive Fast Charging, kana iri kuyedza kuifukidza - zvinoita sekunge pasina kutaurwa nezvayo mune zvese gwara revashandisi uye mukuru mapeji ekutsigira (zvinova zviri zvese S6 uye S7), uye, zvinoshamisa, iyo S8 & apos; s mushandisi interface inogara ichiratidza kukurumidza kuchaja ziviso kana charger inoenderana yakaiswa mukati, kunyangwe izvi zvisiri zvachose kana iri iyo skrini iri pamusoro.
Haisi iyo hombe yekutengesa, handiti? Kunze kwekunge, sePhandroidinoshuma mumayedzo ayo, mutsauko munguva dzekuchaja unenge wakapetwa kaviri, uchibva pa1 awa uye maminetsi makumi matatu nematanhatu nechidzitiro kubva kumaawa maviri nemaminetsi makumi mashanu nemashanu nacho. Saka vashandisi veGlass S8 vanoda foni yavo kubhadhariswa mune piniki vanofanirwa kuona kuti havasi kuishandisa pachinenge ichivharwa mairi & apos.
mabviro: Phandroid kuburikidza SamMobile
Roku inosuma mutsara mutsva wezvigadzirwa, inopa 90-zuva Pandora Premium yemahara kuyedzwa
Samsung & apos; s Galaxy Watch 3 uye Tarisa Inoshanda 2 inowana inopisa inotenderera kutenderera kukuru
Yakanakisa Samsung Galaxy Buds inobata izvozvi
Iyo iPhone 7 Plus portrait kamera vs $ 1600 kamera kit: ndeipi inotora mifananidzo iri nani?
Samsung kushambadza S21 FE seCherechedzo 20 kutsiva zvichitevera kushomeka kwekutengesa kweGPS S21
Maitiro ekushandura iyo Galaxy Note 8 kuita girafu piritsi rePC yako
Samsung Galaxy S6 uye S6 kumucheto zuva rekuburitsa uye mutengo wemitengo